ကမ္ဘောဒီးယားခရီးသွား | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ကမ္ဘောဒီးယား, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ကမ္ဘောဒီးယား သောနိုငျငံတျောဖြစ်ပါတယ် အရှေ့တောင်အာရှ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်အတူခရီးသွား p ည့်ပုလဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်နိုင်ငံသို့မသွားရောက်ပဲတစ်နိုင်ငံတည်းကိုလည်ပတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အိမ်နီးချင်းဗီယက်နမ်ကိုလည်းအဘယ်ကြောင့်မဟုတ်ပါသနည်း။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အလွန်ခရီးသွား destination ည့်သည်၎င်း၏လှပသောရှုခင်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်း၊ gastronomy အတွက် ... စာရင်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ ဒီတော့ဒီနေ့စိတ်ကိုအတူခရီးသွားဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်၎င်း၏ဘဏ္treာများ.
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတော်တည်ရှိသည် အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ်၏တောင်ဘက်ပိုင်းတွင်ရှိသည် ထိုင်း၊ လာအိုနှင့်ဗီယင်နာနိုင်ငံများနှင့်နယ်စပ်မီတာ ၎င်းတွင်လူပေါင်း ၁၅ သန်းခန့်နေထိုင်သောထေရ ၀ ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်သည်။ အကြီးဆုံးမြို့နှင့်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးစင်တာသည်မြို့တော်ဖြစ်သည် ဖနွမ်းပင်။
ဒါကြောင့်ငါတို့မြို့တံခါးကိုဖွင့်တာထက်ပိုကောင်းတာကငါတို့တံခါးပေါက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ မြို့တော် မြစ်သုံးမြစ်၏မြစ်ဆုံတွင်တည်ရှိသည် သို့ဖြစ်၍ ကဏ္ it သုံးခုခွဲခြားထားသည်။ တောင်ဘက်တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံသည်ဘဏ်များ၊ သံရုံးများနှင့်ဟိုတယ်များနှင့်အလွန်ကြော့ရှင်းသည်။ ဗဟိုသည်စျေးကွက်နှင့်လမ်းကြားများနှင့်မြောက်ဘက်တွင်ပိုမိုခေတ်မီသောလူနေအိမ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
Phnom Penh မှာဘာသိထားရမလဲ။ El တော်ဝင်နန်းတော် ၎င်းသည် ၇၅ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသောရွှေ၊ Baraccarat crystal ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြီးမားသောအစိမ်းရောင်ဗုဒ္ဓနှင့်အတူလှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိန်နှင့်အခြားကျောက်မျက်များလည်းရှိသည်။ ၁၈၆၆ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောနန်းတော်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နံရံကပ်နံရံဆေးကြောနံရံများနှင့်လှပသောအဆောက်အ ဦး များလာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။
သင်တို့သည်လည်းသိရန်ရှိသည် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး၁၉၅၈ မှပြင်သစ်လွတ်လပ်ရေးကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်၎င်းအတွက်သေဆုံးခဲ့သူများကိုမှတ်မိခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိပါသည် အမျိုးသားပြတိုက်နေ့တိုင်းဖွင့်လှစ်သောတော်ဝင်နန်းတော်မြောက်ဘက်။ အရှေ့မြောက်ဘက်ရန်ဖြစ်ပါသည် Wat phnomမီတာ ၃၀ အမြင့်ရှိတောအုပ်တစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။ အဲဒါက ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လေးပါးနှင့်အတူဘုရား တဆယ်လေးရာစုကနေချိန်းတွေ့။
La Tuol Sleng ထောင် ဒီနေ့ပြတိုက်ဖြစ်ပေမယ့်အလယ်တန်းကျောင်းဖြစ်ဖူးတယ်။ နောက်ပိုင်း ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင်၎င်းသည်ဖြစ်လာခဲ့သည် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုစင်တာ။ ထည့်ပါ ဗဟိုဈေးကွက်အဆိုပါ Tuol Tom Pong စျေး၊ ထို့အပြင်ခေါ်ခဲ့သည် ရုရှားစျေးကွက်, ထိုလမ်းဖြင့်ကောင်းသောလမ်းကိုသင်တို့လိုက်ရကြလိမ့်မည်။
သဘာဝကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘောဒီးယားအကြောင်းမပြောဘဲမပြောတတ်ဘူး Angkor ရှေးဟောင်းသုတေသနပန်းခြံ။ ဆိုက်ကျယ်ပြန့်သောကြောင့်သင်ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ရှိသည်။ နေ့အလင်းရောင်ကောင်းသောနေ့များကိုစော။ ရောက်ရန်၊ အဝင်ဝမှ ဝင်၍ ဗိမာန်များကိုသံလိုက်အိမ်မြှောင်၏အချက်လေးချက်အရစီစဉ်ထားသည်ကိုသိရန်အဆင်ပြေသည်။ နံနက်ယံ၌သင်အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံများရရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်နောက်တစ်နည်းမှာ Angkor Wat တွင်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်ရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်။
Angkor ကိုလည်ပတ်ရန်အတွက်သင် Pass တစ်ခုရှိရမည် Angkor Pass၊ မင်းကိုခွင့်ပြုတယ် အမျိုးမျိုးသောဘုရားကျောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှု ရှေးဟောင်းသုတေသနပန်းခြံ၌တည်၏။ ၎င်းသည် Angkor Wat သို့သွားသောလမ်း၏အဓိကဝင်ပေါက်တွင် ၀ ယ်သည်။ ရှိပါတယ် တစ်ရက်၊ သုံးရက်နှင့်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးဖြတ်သန်းမှု။ ပန်းခြံကိုနံနက် ၅ နာရီမှညနေ ၆ နာရီအထိဖွင့်ထားသည်။
စီးတီးနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ, ဒါပေမယ့်လည်း ကမ္ဘောဒီးယားသည်၎င်း၏စိတ်ကူးယဉ်ကမ်းခြေများကြောင့်လူသိများသည်။ ထို့ကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် Sihanoukville: အဖြူရောင်သဲများ, နွေးသောရေထိုင်းပင်လယ်ကွေ့နှင့်အလွန်အေးသောအပူပိုင်းဒေသတို့ဖြစ်သည်။
၎င်းကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံ၏အခြားမြို့များနှင့်မြို့ကြီးများနှင့်များစွာကွာခြားသည် ဒါကပိုပြီးနာမည်ကျော်ကြားပြီးမြို့ပြပိုများတယ်ပင်အခြားပြည်နယ်မြို့ကြီးများထက်။ ရှိပါတယ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးဒါပေမယ့်နေဆဲလေထုဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းခြေအများစုသည်ငှားရမ်းရန်ထီးများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဘန်ဂလိုများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များကိုပေးသည်။ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်များမှ hostels များကိုသင်ရှာဖွေသည်။
ဒါဟာအစရှိပါတယ် ကောင်းသောညဘဝအထူးသဖြင့် Weather Station Hill (သို့မဟုတ်) Victory Hill တွင်ဈေးပေါသော guest ည့်သည်များနေထိုင်သောအိမ်များဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေအမျိုးမျိုးနှင့်အလယ်ဗဟိုတွင်ဘားများလည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးငှားရမ်းရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးခြေလျင်လျှောက်ရန်မလုံလောက်ပါ။
သင့်ရဲ့အရာသည်ကမ်းခြေမဟုတ်ပေမယ့်သင့်အရာ ဂေဟခရီးသွားလုပ်ငန်း, ထို့နောက်သင်၏ခရီးတွင်ထည့်ရမည် Rattanakiri ။ ၎င်းသည်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ဖနွမ်းပင်မှ ၆၃၆ ကီလိုမီတာလူနေကျဲပါး။ သဘာဝသဘာ ၀ ရှုခင်းများအရလူသိများသောတောင်များနှင့်တောင်ကုန်းများ၊ မီးတောင်များ၊ မြစ်များ၊ ရေတံခွန်များ၊ အကြံပြုသည့်လမ်းလျှောက်မှုမှာရက်ပေါင်းများစွာကြာပြီးမြို့တွင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း၊ Yeak Loam ရေကန်သို့သွားရောက်ခြင်း၊ ညဘက်တွင်ထွက်ခြင်း၊ Ceal Rumplan သို့သွားရောက်ခြင်းသို့မဟုတ် Sre San မြစ်တစ်လျှောက်ရှိ၎င်း၏ကျေးရွာများ၊ Virachay National Lumphat တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သန့်ရှင်းရာဌာနသို့လည်ပတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ပန်းခြံ။
ဒါ့အပြင်ဒီခရီးစဉ်ကနေထွက်ခွာသင့်ပါတယ် Andoung Meas သို့မဟုတ် ရွှေစမ်းကော်ဖီသို့မဟုတ်ရော်ဘာစိုက်ခင်းများ၊ Katieng ရေတံခွန်များ, Ou'Seanlair ရေတံခွန်သို့မဟုတ်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်မိုင်းများ။ ဇွန်လမှအောက်တိုဘာလအထိမိုးရာသီရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်သတိရပါ Rattanakiri ကိုသာကုန်းဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည် တစ်ချိန်ကသင်သည်ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ လှေသို့မဟုတ်ဆင်တို့ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ သင်ဘာရွေးသလဲ
နောက်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ - တိုင်းပြည်၏ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော် - Battambang, စပါးစိုက်ပျိုးမြေနှင့် Khmer Rouge။ ၎င်းသည်ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအကြားအဆက်အသွယ်ရှိသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် ပြင်သစ်ဗိသုကာအများကြီး.
လည်ပတ်ရန်ဆွဲဆောင်မှုများထဲတွင်ဖြစ်ကြသည် Barseat ဘုရားကျောင်း အဲ့ဒါကအနှစ်တစ်ထောင်ပဲ Wat Ek ဘုရားကျောင်း ဒသမရာစု၏ ဗနမ်ဘုရားကျောင်း တစ်ချိန်တည်းမှ ပို၍ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော Prasat snung တောင်ကုန်းပေါ်ရှိအုတ်ခုံသုံးခုံနှင့် Phnom Sam Pov၊ Boeng Kam Pinh Puoy နှင့် Sek Sak တို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်အလွန်လှပသောသဘာဝအလှအပများဖြစ်သည်။
သငျသညျမွငျသကဲ့သို့, သင်ကမ္ဘောဒီးယားစဉ်းစားသည့်အခါကမ်းခြေစဉ်းစားလိမ့်မည်ပေမယ့်အမှန်တရားက, သင့်ရဲ့ခရီးကိုသမိုင်း, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အံ့သြဖွယ်သဘာဝအပြည့်အဝအတွေ့အကြုံသို့လှည့်ရန်အလွန်ကြီးစွာသော ဦး တည်ရာဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » ကမ္ဘောဒီးယား » ကမ္ဘောဒီးယားခရီးသွားလုပ်ငန်း
Granada ရှိ Alhambra သို့သွားရောက်ပါ